Torolàlana vonjy taitra any Puerto Rico ho an'ireo mpizahatany, hotely, seranam-piaramanidina, trano fisakafoanana ary fivarotana
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Torolàlana vonjy taitra any Puerto Rico ho an'ireo mpizahatany, hotely, seranam-piaramanidina, trano fisakafoanana ary fivarotana
Inona ny toe-javatra any Puerto Rico raha ny COVID-19 sy ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany.
Puerto Rico, Teratany Etazonia any Karaiba dia manana anjara asa lehibe amin'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany eran'izao tontolo izao. Noho ireo horohoron-tany sy rivodoza tato ho ato dia nanjary fanilo momba ny faharetana ilay nosy. Miaraka amina tranga efatra voasoratra anarana ao amin'ny Coronavirus amin'izao fotoana izao dia kely indrindra ny fiatraikan'ny COVID-19 miely ao amin'ilay nosy. Mailo be ny faritany miaraka amin'ny Etazonia sisa.
Ny governoran'i Puerto Rico, Hon. Wanda Vázquez-Garced, dia nanao sonia ny Executive Order 2020, izay mikasa ny hitazona sy hitantana ny fiantraikan'ny COVID-023 any Puerto Rico.
Seranam-piaramanidina: Mijanona hisokatra ho an'ny fitsangatsanganana miditra sy ivelany. Ny fanitsiana ny zotram-pitetezana dia alain'ny zotram-piaramanidina tsirairay, mifanaraka amin'ny fetra fitsangatsanganana, araka ny fanapahan-kevitry ny governemanta amerikana. Ny fiasa mahazatra eny amin'ny seranam-piaramanidina dia tsy misy fiatraikany amin'ny famerenam-potoana. Ireo mpandeha tonga na miainga avy any amin'ny seranam-piaramanidina aorian'ny ora tsy ahafahany mivezivezy dia afaka mivezivezy mankany amin'ny toerana alehany avy. Ny asa fivarotana antsinjarany ao anatin'ny seranam-piaramanidina dia iharan'ny lalàna mitovy amin'ireo any amin'ny nosy sisa, ahafahan'ny orinasa tena ilaina misokatra ihany. Ny trano fisakafoanana sy trano fisakafoanana ara-tsakafo dia mbola hisokatra ihany, fa voafetra ho an'ireo afaka manolotra ny tolotra ataon'izy ireo amin'ny alàlan'ny fanaterana na fandefasana. Ireo trano fisakafoanana voalaza fa tsy afaka manolotra ny tolotr'izy ireo amin'ny fomba voalaza etsy ambony ihany, ary tsy hampiantrano vahiny amin'ny toerany.
Indostrian'ny mpiasa: Ny Executive Order dia manome ny mpiasa izay tsy maintsy mivezivezy, avy amin'ny toeram-ponenany mankany amin'ny toeram-piasana, aorian'ny curfew hahafahany manao izany. Amporisihinay mafy ny mpampiasa hanome fanamarinana ho an'ny mpiasa izay tokony hanitsy ny ora tsy azo ihodivirana izay azo aseho amin'ny mpiasan'ny lalàna. Ireo mpiasa ireo dia hanaja ny fomba amam-panaon'ny Fizarana 3 ao amin'ny didim-panjakana.
Fandehanan-tsambo: Nikatona ny San Juan Bay amin'izao fotoana izao ho an'ny sambon'ny sambo fitsangantsanganana.
Hotels: Misokatra hatrany. Ireo faritry ny daholobe sy ireo kojakoja ilaina amin'ny hotely, toy ny spaoro, dobo ary toerana fialamboly dia tsy maintsy mihidy. Ny serivisy amin'ny efitrano dia afaka ary tokony hijanona ho an'ny vahiny. Mahazo alalana ny fanohanana ny birao miverina hitazomana ny fihazakazahana trano fandraisam-bahiny ilaina. Ny trano fandraisam-bahiny rehetra dia tsy maintsy mandray fepetra sy fitandremana tsy manam-paharoa mba hiarovana ny fahasalamana sy ny fiarovana ny vahiny rehetra, hiantohana ny fisian'ny fisorohana sy ny kaontenera mifehy tsara. Ny fitantanana hotely dia hampandre ny mpiasan'izy ireo fa tokony homena lanja manokana ny fomba amam-panao ny fizarana faha-3 ao amin'ny didim-panjakana.
trano filokana: Hikatona manomboka amin'ny 6:00 hariva anio hatramin'ny 31 martsa 2020.
trano fisakafoanana: Mbola hisokatra ihany saingy, voafetra ho an'ireo afaka manolotra ny tolotra ataon'izy ireo amin'ny alàlan'ny drive-thru, fanatanterahana na fandefasana. Ireo trano fisakafoanana voalaza fa tsy afaka manolotra ny tolotr'izy ireo amin'ny fomba voalaza etsy ambony ihany, ary tsy hampiantrano vahiny amin'ny toerany. Hakatona ny bara ao anaty trano fisakafoanana.
Toeram-pisakafoanana ao anaty hotely: Mbola hisokatra ihany fa, voafetra ho an'ireo afaka manolotra ny tolotra ataon'izy ireo amin'ny alàlan'ny entina sy ny fandefasana. Ireo trano fisakafoanana voalaza fa tsy afaka manolotra ny tolotr'izy ireo amin'ny fomba voalaza etsy ambony ihany, ary tsy hampiantrano vahiny amin'ny toerany. Hakatona ny bara ao anaty trano fisakafoanana.
Attractions: Ny orinasa rehetra dia tokony hikatona afa-tsy ny fivarotam-panafody, fivarotana lehibe, banky, na ireo mifandraika amin'ny indostrian'ny sakafo na fanafody. Izany dia mihatra amin'ny toeram-pivarotana, sinema, efitrano fanaovana fampisehoana, trano filokana, trano fisotroana, fivarotana zava-pisotro misy alikaola, na toerana hafa izay manamora ny fivorian'ny olom-pirenena. Raha jerena ireo mason-tsivana voalaza etsy ambony ireo dia tsy maintsy mikatona ny fisarihana.
Tours: Ny orinasa rehetra dia tokony hikatona afa-tsy ny fivarotam-panafody, fivarotana lehibe, banky, na ireo mifandraika amin'ny indostrian'ny sakafo na fanafody. Izany dia mihatra amin'ny toeram-pivarotana, sinema, efitrano fanaovana fampisehoana, trano filokana, trano fisotroana, fivarotana zava-pisotro misy alikaola, na toerana hafa izay manamora ny fivorian'ny olom-pirenena. Raha jerena ireo mason-tsivana voalaza etsy ambony, dia tsy tokony hiasa ny fitsangatsanganana.
Mpamatsy fitaterana: Serivisy ilaina ny fitaterana. Ny mpamily Uber sy taxi dia avela hiasa, miankina amin'ny fetra voafetra ao amin'ny Fizarana 3 amin'ny didim-panjakana.
Masoivoho Travel: Tsy maintsy mikatona ny asan'ny fivarotana maso sy maso ny maso fivarotana. Ny orinasan'ny fizahan-tany any Puerto Rico dia manome alalana ireo mpitsangatsangana mba ho afaka miasa lavitra raha tsy misy ny fampandrenesana fanampiny.
Manakatona seranam-piaramanidina any Hawaii? Izay nolazain'ny Governora Ige sy ny filoha Trump
California, New York ary Washington dia nanambara fa ahiana indrindra ny COVID-19